Nwa amaala Montenegrin maka ụlọ nkwari akụ nke MONTIS MOUNTAIN RESORT
Mbugharị gara aga
Roomlọ nkwari akụ ụlọ + ụmụ amaala Montenegrin
MONTIS MOUNTAIN RESORT nke Splendid - a na-ewu ụlọ ezumike 5 nke nwere ụlọ 238 n'akụkụ akụkụ ugwu dị na mgbago ugwu Montenegro, na mpaghara Kolasin, site na nkwado nke mmemme steeti "Montenegrin Citizenship by Investment", maka nke a E nyere ikike iji rụọ ọrụ na Septemba 2020.
Dịka usoro ihe omume a si dị, nzụta ụlọ (ọnụ ụlọ) na MONTIS MOUNTAIN RESORT nke Splendid na-akwụ maka of 250 ma ọ bụ karịa na-eme ka o kwe omume inweta ụmụ amaala Montenegrin (ụgwọ ndị ọzọ) maka onye na-etinye ego ahụ n'onwe ya, nwunye ya na umuaka. Ọ dị mkpa iburu n'uche na onye na-achụ ego anaghị etinye ego na oke, mana na akụ na MONTIS MOUNTAIN RESORT nke Splendid, na-azụta otu ụlọ (ọnụ ụlọ). Ọzọkwa, a na-etinye arịa dị na ọnụahịa ahụ.
Ọ bụ ndị ama ama Splendid ga-achịkwa MONTIS MOUNTAIN RESORT nke Splendid ga-achịkwa, nke na-ekwe nkwa ịlaghachi ngwa ngwa na ọnụọgụ uru bara uru. Ọzọkwa, na nkwari akụ SPLENDID 5 * na ndịda Montenegro, ọ ga-ekwe omume ịnọ n'efu maka izu 1 kwa afọ na afọ mbụ mgbe etinyechara ego ahụ.
Ma mgbe emechara ụlọ ahụ, otu ọnwa kwa afọ ọ ga-ekwe omume ibi na MONTIS MOUNTAIN RESORT nke Splendid, na nke a abụghị naanị ego maka onye na-etinye ego na ọrụ a.
Yingzụta ụlọ (ụlọ) na họtel MONTIS MOUNTAIN RESORT nke Splendid maka ego nke ,250 000 ma ọ bụ karịa na-enye ohere iji tinye maka ụmụ amaala Montenegrin (+ ụgwọ ndị ọzọ) maka ndị na-etinye ego, nwunye ya na ụmụ ya na-ahụ maka ego.
Onye na etinye ego etinyeghi ego na oke ya, kama na aku na MONTIS MOUNTAIN RESORT nke Splendid, na-azuta otu ulo (ulo).
Uru ndị ọchụnta ego
Onye nrụpụta ahụ ga-akwụ ụgwọ nkwụnye ego 40% nke uru nrite site na ụlọ site na afọ
Ọnụ ụlọ ahụ gụnyere ịkwado ya, a ga-emecha ya dabere na atụmatụ ọkọlọtọ, dabere na imewe mepụtara
Enweghị ụgwọ maka mmezi nke ala na ụlọ, n'adịghị ka ọrụ ndị ọzọ na-enyekwa aka
Ruo mgbe arụchara ọrụ a na 2024, onye na-achụ ego nwere ike ibi otu izu 1 kwa afọ na ụlọ nkwari akụ SPLENDID (ndịda Montenegro).
Emechaa - ọnwa 1 n’afọ na MONTIS MOUNTAIN RESORT nke Splendid.
Dịka usoro nkwekọrịta ahụ si kwuo, ọ ga-ekwe omume ịre ụlọ ahụ (ụlọ) na 5 afọ.
Ma ọ bụ chekwaa ego ahụ wee gaa n'ihu na-enweta pasent nke uru ụlọ nkwari akụ ahụ.
Kolasin bụ obere ebe ezumike dị 73 kilomita n'akụkụ ugwu nke obodo Podgorica n'akụkụ aka ekpe nke Osimiri Tara na elu 960 m karịa elu oke osimiri. Ugwu ugwu ato gbara ya gburugburu - Sinyavina, Komovy, Belasitsa.
Laghachi na Citizenship nke Montenegro